कोरोना संक्रमण र मृत्युदर घट्यो «
कोरोना संक्रमण र मृत्युदर घट्यो
कोरोना संक्रमण उच्च भएको बेलाको तुलनामा हाल संक्रमितको संख्या आधाले घटेको छ । वैशाख २८ गते सबैभन्दा बढी ९ हजार ४८३ पुगेको कोरोना संक्रमितको संख्या पछिल्लो केही दिनयता ३ हजारको हाराहारी रहेको छ । वैशाखको अन्तिम साता औसत ९ हजार ४ सय कोरोना संक्रमितको संख्या आइतबार २ हजार ४०७ मा सीमित भएको छ । यसैगरी जेठ ५ गते सबैभन्दा बढी २४६ जनाको एक दिनमा मृत्यु भएकोमा आइतबार ४६ जनाको मात्र भएको छ । यो भनेको १.६ प्रतिशत हो ।
दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढेपछि गरिएको १ महिनाभन्दा लामो निषेधाज्ञाका कारण संक्रमण र मृत्यु घटेको छ भने निको हुने दर बढेको छ । सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचार नियन्त्रणमा पछिल्लो समय गरेका केही नीतिगत कामलाई कार्यान्वयन गर्दै लगेपछि त्यसको प्रभाव संक्रमण हुने दर घटेको र निको हुनेको दर बढेको छ । विगत एक हप्ताको तथ्यांकमा संक्रमित हुने दैनिक दर २५ बाट घटेर २३ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ । यो घटेको तथ्यांक कोरोना परीक्षण गराएका संख्याका आधारमा तयार गरिएको दर हो । यसैगरी निको हुने दरसमेत लगभग बढेको छ । गत हप्ता निको हुने दर १५५ प्रतिशत रहेकोमा सो दर हाल १८६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यो तथ्यांक सोही समय संक्रमित हुने र निको हुनेको संख्याका आधारमा तयार गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृण्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
हालसम्म नेपालमा ३२ लाख १४ हजार ७२५ जनाले कोरोना संक्रमणको आशंकामा पीसीआर परीक्षण गराएकोमा ६ लाख ८ हजार ४७२ मा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी संक्रमण भएकामध्ये ८ हजार ४१२ जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने कुल प्रतिशत ८७.३ रहेको समेत मन्त्रायले जनाएको छ ।
कोभिडको निःशुल्क उपचार गराउन थप निर्देशन
सरकारले कोभिड–१९ संक्रमितलाई निःशुल्क सेवा दिनका लागि सबै सरकारी अस्पतालहरुमा र केही निजी अस्पतालसँग सेवा सम्झौता गरेको व्यवस्थालाई थप कडाई गरेको छ । सरकारसँग यसअघि विभिन्न तहबाट सम्झौता भएका निजी अस्पतालहरुको सूची मन्त्रालयले दैनिक रुपमा भाइबर, फेसबुक र वेबसाइट आदि माध्यममा सार्वजनिक गरीरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले अस्पताल व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले तोकिएका अस्पताल समितिहरुलाई निःशुल्क सेवाको लागि पुनः अनुरोध गरेको जनाएका छन् ।
सम्पूर्ण संक्रमितहरुको अस्पताल अनुसार नै मन्त्रालयको सूचना प्रणाली (आईएमयू) मा अनिवार्य प्रविष्टि हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस भन्दा अन्यथा गरेको सेवाग्राहीको विवरणहरु फरक परेमा वा कुनै पनि सेवाग्राहीलाई समस्या परेको पाइए सरकारबाट हुने कुनै पनि शोधभर्ना उपलब्ध नगराइने, निःशुल्क कोभिड–१९ को सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको सूचिबाट हटाउने, अस्पतालको दर्ता खारेज गर्ने तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही समेत गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।